ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ရှစ်ကြိမ်မြောက် သိပံ္ပနှင့်သင်္ချာ ပညာရေး ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ အတွေ့အကြုံများ – အပိုင်း ၂ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျော်မက်ထရီပညာ၏ အရေးပါပုံကုိုိသိ၍ သူ၏ကျောင်းအပေါက်အဝတွင် “ဂျော်မက်ထရီပညာကုို မသိသောသူ ဒီကုို မဝင်ရ” ဟူသော စာတမ်းကုို ထုိုးထားခဲ့သည်။
အွိုင်လာက ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်တွင် 2×2=4, 4×2=8, 8×2=16 , ဟု စရေးလိုက်သည်။ ဆက်လက်၍ … 256×2=512 , 512×2=1024,…… တက်ရောက်သူများက တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့် ဘာတွေလဲ ? ဟု မေးကြသည်။ ကျောင်းသားများကလည်း သူတုို့၏ မှတ်စုစာအုပ်များထဲတွင် ကူးရေး ရမလုို၊ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေကြသည်။ ဖါးမယ်သည်2ကုို 32 ကြိမ် မြှောက်ပြီးသွားသောအခါ
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သတင်းဆောင်းပါး, ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္), လောကဓာတ်ခန်း
2 Responses to ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ရှစ်ကြိမ်မြောက် သိပံ္ပနှင့်သင်္ချာ ပညာရေး ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ အတွေ့အကြုံများ – အပိုင်း ၂
Catwoman on January 8, 2016 at 9:59 am
I don’t understand it. I guess that s why I m notamath professor butaphysician. I didn’t get it.
Ohn on January 20, 2016 at 2:04 am
Nothing enigmatic. Just not expressed well.